၂၀၁၇ ခုနှစ် စိန့်ပီတာစဘတ်မီသရို ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
စိန့်ပီတာစဘတ်မီသရိုလိုင်းပေါ်ရှိ ဆန်နာယားရင်ပြင် ဘူတာရုံနှင့် တက္ကနော်လော်ဂျီချက်စကီး အင်စတီကျူ ဘူတာရုံအကြားစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့၊ ရုရှားနိုင်ငံ
59°54′59″N 30°19′07″E﻿ / ﻿59.91639°N 30.31861°E﻿ / 59.91639; 30.31861ကိုဩဒိနိတ်: 59°54′59″N 30°19′07″E﻿ / ﻿59.91639°N 30.31861°E﻿ / 59.91639; 30.31861
၃ ဧပြီ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၄-၀၃)
၁၄:၄၀ (EEST (UTC +3))
၁၅ ယောက် (ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံအပါအဝင်)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့တွင် စိန့်ပီတာစဘတ်မီသရိုလိုင်းပေါ်ရှိ ဆန်နာယားရင်ပြင် ဘူတာရုံနှင့် တက္ကနော်လော်ဂျီချက်စကီး အင်စတီကျူ ဘူတာရုံအကြားတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကနဦးသတင်းများအရ လူ ၇ ဦးသည် ဗုံးပေါက်ကွဲသည့်နေရာတွင်ပင် သေဆုံးခဲ့ပြီး ဆေးကုသနေစဉ် အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် နောက်ထပ် ရှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ၁၅ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ ။
အဆိုပါဗုံးဖောက်ခွဲမှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၄၅ ဦးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။  ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းအား ရုံးသုံးလက်ဆွဲအိတ်အတွင်း ထည့်သွင်းသယ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပေါက်ကွဲစေတက်သော ပစ္စည်းပါရှိသော ဒုတိယမြောက် တစ်ခုအား ဗော့စတန်နီးယားရင်ပြင်ဘူတာရုံတွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရထားပေါ်တွင်ပင် ထိုဗုံးအား အသက်မဲ့အောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။သံသယရှိသူ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံ၏အမည်မှာ အာ့ခ်ဘားရွှန် ဂျာလီလော့ဗ်ဖြစ်ပြီး ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံဖွား ဥဇဘတ်လူမျိုး ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သည်။
၃.၁ ကနဦး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
၄.၃ အခြားသော တုံ့ပြန်မှုများ
စိန့်ပီတာစဘတ် မီသရိုလိုင်းပေါ်ရှိ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာ ဘူတာရုံနှစ်ခု၏ တည်နေရာ
ရုရှားနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ လူ ၅၀ ယောက်ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ၁၄ ဦး (ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားစဉ် ၇ ဦး၊ ဆေးကုသနေစဉ် ၇ ဦး)သေဆုံးခဲ့သည် ဟုဆိုသည်။ ၃၉ ဦးသည် ဆေးရုံတွင် ကုသလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အထဲမှ ၆ ဦးသည် အရေးပေါ်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူများထဲတွင် ကလေးငယ်များလည်း ပါဝင်နေသည်။
ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားထောက်လှမ်းရေးတို့၏ စုံစမ်းထုတ်ဖော်မှုအရ တိုက်ခိုက်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်ဟု သံသယရှိသူမှာ ဥဇဘက်(Uzbeks)လူမျိုး၊ ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံဖွား ရုရှားနိုင်ငံသား Akbarzhon Jalilov ဖြစ်သည်။ ဂျာလီလော့ဗ်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံ၊ အော့ရှ်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မော်စကိုသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရုရှားသတင်းစာ Moskovskij Komsomolets အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ဆူရှီဘားတစ်ခုတွင် စားဖိုမှူးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း Gazeta.ru က ဆိုသည်။ အခြားရင်းမြစ်များအရ ဂျာလီလော့ဗ်သည် ဂိုဒေါင်တစ်ခုတွင် လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှု မလုပ်မီ တစ်ပတ်ခန့်အလိုတွင် ပျောက်သွားခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အာဏာပိုင်များက သူသည် အစ္စလာမ် အစွန်းရောက်အုပ်စုများနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း အင်တာဖက်(Interfax)က ဆိုသည်။
ထိခိုက်မှုများအတွက် ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းကို တရုတ်၊ ချက်နိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အစ္စရေး၊ မလေးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ယူကရိန်း၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ NATO၊ နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင် နိုင်ငံတကာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်မှုများကို ထိတ်လန့်မှုကြောင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ မီသရိုဘူတာရုံများတွင် လုံခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
↑ 'Мы начали ехать, я увидел взорванный вагон': что писали очевидцы о взрыве в Петербурге။ ТАСС информационное агентство (3 April 2017)။
↑ Denis Pinchuk။ "Eleven killed in suspected suicide bombing on Russian metro train"၊ Reuters။
↑ ၃.၀ ၃.၁ "В петербургской больнице скончались двое пострадавших при взрыве в метро" (in ru)။
↑ Russia Bomber Is Identified, Officials Say, as Death Toll Rises။ New York Times Company (4 April 2017)။ “In addition to killing 14, the blast on Monday wounded 64 others, Aleksandr Rzhanenkov,aSt. Petersburg official, said atanews briefing.”
↑ ၅.၀ ၅.၁ St Petersburg metro bombing suspect 'from Kyrgyzstan'။ BBC News Online။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Число жертв теракта в Петербурге выросло до 14 человек [Number of fatalities of the terrorist act in Petersburg has grown to fourteen people။ Meduza (4 April 2017)။ “В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. [In the aftermath of explosion in the metro of Saint Petersburg 14 people have died, reported by the minister of health of Russia Veronika Skvortsova]”
↑ "Signs of terror attack in St. Petersburg subway blast obvious – Kremlin"၊ TASS၊4April 2017။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "The Russian Investigative Committee has qualified the blast asaterrorist attack, but other versions are looked into."
↑ ၈.၀ ၈.၁ Explosion in St. Petersburg Metro Kills at Least 10။ The New York Times။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ "Взрыв в метро Санкт-Петербурга: погибли 10 человек" (in Russian)၊ BBC Russia၊3April 2017။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ St Petersburg metro explosions kill ten - media။ BBC (3 April 2017)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ At least 10 people may have been killed by Russia metro blast: TASS။ Reuters (3 April 2017)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Explosion in St. Petersburg Metro, fatalities confirmed (GRAPHIC IMAGES)။ Russia Today (3 April 2017)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Названо имя предполагаемого террориста-смертника в Санкт-Петербурге" (in ru)၊ mk.ru။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ "Verdächtiger Kasache ist unter den Opfern" (in de)၊ n-tv။
↑ "Azerbaijani woman confirmed dead in St. Petersburg metro blast - UPDATED" (in en)၊ apa.az Mail။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on5April 2017။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ ၁၆.၂ "St. Petersburg: Zahl der Terroropfer steigt auf 14" (in de)၊ Die Presse။
↑ "St. Petersburg Metro blast"၊ RT၊4April 2017။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Скворцова уточнила данные о погибших в результате взрыва в Петербурге။ Interfax (3 April 2017)။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ St. Petersburg metro explosion: 11 dead in Russia blast။ CNN (3 April 2017)။ “Thirty-nine people have been hospitalized, six of whom had critical injuries, the health ministry said, putting the number of dead at 11.”
↑ St Petersburg metro bomber 'from Kyrgyzstan '
↑ St. Petersburg bomber came from 'very good' family, say neighbors။5April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ St. Petersburg metro bomber reportedly identified as Kyrgyz-born ethnic Uzbek
↑ Russian investigators confirm Kyrgyz-born Russian citizen was behind St Petersburg subway attack။ SPH Digital News (4 April 2017)။ “"The investigation identified the man who set off the bomb in the carriage of the Saint Petersburg metro. It was Akbarjon Djalilov," [sic]astatement by the committee said, adding that Djalilov's "genetic trace" was also found onabag withasecond bomb that was found atadifferent station.”
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Jamieson၊ Alastair။ "St. Petersburg Subway Bomb Suspect Named as Akbarzhon Jalilov: Reports"၊ NBC News၊ Moscow: NBCUniversal၊4April 2017။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Walker၊ Shaun။ "St Petersburg metro bombing suspect 'from Kyrgyzstan'"၊ The Guardian၊4April 2017။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ Взрыв в метро Санкт-Петербурга: онлайн-трансляция။ MK။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Появились новые фото предполагаемого смертника из метро Петербурга"၊ Газета.Ru။
↑ "Russia attack: Kyrgyzstan releases name of suspect in St Petersburg metro bombing"၊ Independent၊ April 4, 2017။ April 4, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၉.၀ ၂၉.၁ ၂၉.၂ ၂၉.၃ Asian leaders extend condolences to Russia over bomb blast။ Asian Corresponden (4 April 2017)။4April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Prezident republiky zaslal kondolenční telegram ruskému prezidentovi (in cs) (3 April 2017)။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World leaders send their sympathies to St Petersburg bombing victims' families (3 April 2017)။3April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ "Bombing on St Petersburg metro leaves at least9dead" (in en-GB)၊ The Independent၊3April 2017။
↑ PM Kvirikashvili saddened by St. Petersburg metro explosions။
↑ Saint Petersburg bombing – Viktor Orbán writes letter to Vladimir Putin။5April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statement by the Ministry of Foreign Affairs and Trade on the terrorist attack in Saint Petersburg။5April 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Indonesia Condemns Russia's St. Petersburg Terror Attack" (in en-US)။
↑ "Netanyahu says Israel stands with Russia after deadly metro attack"၊ Jerusalem Post၊3April 2017။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sankt Petersburg: eksplozja w metrze. Są zabici i ranni [NA ŻYWO] (in Polish)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rosja. Wybuch w metrze w Sankt Petersburguc (in Polish)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Explosão no metro de São Petersburgo provoca vários mortos [Explosion in the subway of St. Petersburg causes several deaths]။ RádioeTelevisão de Portugal (3 April 2017)။
↑ Ukrainian foreign minister condoles with families of people killed in St. Pete။ Interfax Ukraine (3 April 2017)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ukraine tightens security in light of St. Pete metro blast။ Interfax Ukraine (3 April 2017)။3April 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၇_ခုနှစ်_စိန့်ပီတာစဘတ်မီသရို_ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း&oldid=727582" မှ ရယူရန်